Madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya oo la iskudayay in safar laga hor istaago - BBC News Somali
Waxaa goordhow gaaray magaalada Beledweyne ee xarunta Gobalka Hiiraan diyaaradd ay la socdeen Madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud oo hoggaaminayay wafdi ka socda Madasha Xisbiyada Qaran.
Waxaa jiray warar sheegayay in goor sii horreysay oo saaka ah diyaaradda ay la socdeen madaxdii hore ay u suurtageli waysay in ay cagadhigato garoonka magaalada Beledweyne kadib markii lagu wargeliyay in aanay soo degi karin.
Dhanka kale Wasiirkii hore Aminga ee Dowladda Soomaaliya Cabdirisaaq Maxamed ayaa bartiisa Twiter-ka ku soo qoray in dowladda Federaalka Soomaaliya ay isku dayday in si sharci darro ah ay u xanibto diyaaradii ay saarnaayeen oo ku wajahaneyd Beledweyne.
Dowladda Soomaaliya ayaan gabi ahaanba ka hadlin dhacdan maanta aad loo hadalhayo
Maxay ka dhigan tahay madaxdii hore ee Soomaaliya ee weli siyaasadda u hanqaltaagaya?
Ilaa iyo hadda waxaa soo baxaya hadallo is qilaafsan oo ku saabsan arrintan diyaaradda ee ay la socdeen madaxdii hore hase yeeshee waxaa jirtay in horey madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif laga joojiyay xili uu doonayay in uu ka qayb galo xafladii caleema-saarka ee Axmed Madoobe, iyadoo ugu dambeyntiina muddo kadib loo ogalaaday in uu tago magaalada Kismaayo.
Balse tan iyo xiligaas waxaa sii xoogeysanayay in talaabooyinka madaxda Dowladda ay dhaliilayaan madaxdii hore oo muqdisho shirar ku qabtay taasi oo dowladda fedaraalka ahna aysan ilaa iyo hadda ka hadlin.